I-Aveco kunye ne-Spectra Logic Hlanganisa amandla eSiphelo ukuya kwi-End yokuGcina isisombululo sokuhamba komsebenzi | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Ulawulo lokuqukethwe » I-Aveco kunye ne-Spectra Logic Hlanganisa amandla oPhela ukuya kwi-End Ingest kuVimba weSisombululo sokuhamba komsebenzi
I-Aveco kunye ne-Spectra Logic Hlanganisa amandla oPhela ukuya kwi-End Ingest kuVimba weSisombululo sokuhamba komsebenzi
Umdibaniso opheleleyo we-Aveco ASTRA MAM kunye ne-Spectra Logic BlackPearl zibonelela ngolawulo olungenamthungo lwevolum enkulu yemixholo yemidiya
I-Aveco ®, umboneleli omkhulu ozimeleyo osebenza kumzi mveliso weendaba, kunye ne-Spectra Logic®, inkokeli kugcino lwedatha kunye nezisombululo zolawulo lwedatha, namhlanje ngokudibeneyo babhengeze ulawulo lwe-asethi ehlanganisiweyo (MAM) kunye nesisombululo sokugcina, esivavanywe ngokupheleleyo, saqinisekiswa beka emoyeni.
Ngokusekwe kwi-Aveco ASTRA MAM kunye ne-Spectra® BlackPearl® Inkqubo eVuliweyo yoGcino, abasebenzisi banako ukulawula nokukhusela umxholo wabo ngaphandle komthungo-ukusuka ekungeniseni ukuya kwimveliso kugcino kunye nokusasazwa. Ulawulo lobomi, uthotho oluzenzekelayo kunye nokunxibelelana kwelifu kwenza ukuba abasebenzisi bokugqibela bakwazi ukulawula iindleko kunye nokusebenzisa iinkonzo zefu apho kunengqiqo.
"Nge-Spectra BlackPearl ngokudibeneyo ukudibanisa ukulawulwa kokuhamba komsebenzi (kubandakanya ugcino) kwisisombululo se-Aveco ASTRA MAM, abasebenzisi ngoku banokukhangela ngokuthe ngqo kwaye bakhumbule ii-asethi nokuba bahlala phi, nokuba bakuliphi na ifu ngaphakathi kwe-MAM," utshilo uHossein ZiaShakeri, uSekela Mongameli weSekela likaMongameli woPhuhliso lwezoShishino kunye neManyano yeQhinga. "Esi sesona sisombululo sisiso kwimibutho yemidiya efuna ukugcinwa okungabizi kakhulu kwaye kuhlaselwe ngokusekwe kwimigangatho evulekileyo eteyipini, kwidiski yokugcina izinto okanye kwilifu, ukuqinisekisa ukuba umxholo wabo uyakuhlala ixesha elide."
Kwinqanaba layo, i-ASTRA MAM ibonelela ngesiseko sedatha kunye neseti yezixhobo zazo zonke izicelo ze-ASTRA. Ukuba zonke izixhobo zidityaniswe ngokuqinileyo kwinkqubo yokulawulwa kweeasethi yemithombo yeendaba zenza iindleko ezisezantsi, ukusebenzisana okungcono, kunye nokuhamba ngokulula kokusebenza. IBlackPearl ibonelela ngesango langoku, elilula loyilo lokugcina izinto ezininzi kunye nokudityaniswa ngokupheleleyo kwisisombululo se-Aveco ASTRA MAM esivumela ukukhangela ngokuthe ngqo kunye nokukhumbula iiasethi.
(Cofa umfanekiso okanye apha ukuze ufumane isisombululo esiphakamileyo)
"Injongo yethu ephambili nge-ASTRA MAM kukubonelela ngeqonga eliphambili kuwo wonke umxholo osetyenzisiweyo kwimveliso kunye nolawulo oluphambili kunye nokunika abaqhubi indlela elula kodwa enamandla yokwenza imisebenzi yemihla ngemihla," utshilo uPavel Potuzak, u-CEO we-Aveco. "Ukudityaniswa kweSpectra BlackPearl kwakhela kule njongo ngokongeza kugcino olunamandla kunye nesoyikekayo kwisisombululo esigcweleyo sokugcina."
I-Aveco, esekwe kwiRiphabhlikhi yaseCzech, eUnited States, eIndiya, eRashiya naseThailand, iyila, ithengise, kwaye ixhase ukuveliswa kwesitudiyo, ulawulo oluzenzekelayo, kunye neenkqubo zokudlalwa komjelo kwihlabathi liphela. Iindidi zoyilo ziyafumaneka, ukusuka kumajelo amaninzi entsonkothileyo, ukusebenza kweendawo ezininzi ukuya kwiinkqubo ezizimeleyo ezizimeleyo, kunye nokusukela kwimveliso yokugqibela yokuphela kunye neendawo zokudlala kwimveliso nganye. Ngabathengi abangaphezu kwama-300 eYurophu, eMelika, eAsia naseAfrika, i-Aveco inetekhnoloji kunye namava okuhambisa nakuphi na ukuhamba komsebenzi, ukulawula nasiphi na isixhobo senkampani yesithathu, kunye nokubonelela iinkampani zemithombo yeendaba ukuthembeka kunye nenkxaso yeeyure ezingama-24 i-Aveco yaziwa ye. Kwi-2019, inkampani yanikezelwa nge-IBC Innovation Award kwiCandelo loMxholo kuyo yonke indawo yomsebenzi wayo wokuzenzekelayo we-ETV Bharat yenkqubo ye-automation eqhuba ii-studio ezingama-24 kunye namajelo eendaba angama-24 ngokusisigxina kwiilwimi ezili-13 zokusetyenziswa kweendaba eziselfowuni. Ukusukela ukuyilwa kwayo ngo-1992, i-Aveco iye yahlala iyinkampani yabucala ezinzileyo, ezinokuzibophelela ixesha elide ekukhuleni okuzinzileyo kunye nenkxaso esexesheni.
Nokuba ngumsasazi weendaba, ijelo lokonwaba ngokubanzi, ijelo lomculo, okanye umbutho weTV, i-Aveco inceda iinkampani zemithombo yeendaba ukuba zibe ziifektri zomxholo, zivelise, zilawule, kwaye zihambise umxholo ngokuthembekileyo, ngokufanelekileyo, kunye nefuthe eliphezulu.
Olunye ulwazi lufumaneka kwi www.aveco.com, nge email [imeyile ikhuselwe], okanye ngokutsalela ikomkhulu lethu ePrague ku + 420-235-366-707, kwiofisi yethu yaseNew Delhi apha + 91-989-901-1397, kwiofisi yethu yaseBangkok kwa +66 (0) 828 170 113, okanye los Angeles iofisi e + 1-818-292-1489.
Malunga neSpectra Logic Corporation
I-Spectra Logic iphuhlisa ukugcinwa kwedatha kunye nezisombululo zolawulo lwedatha ezisombulula ingxaki yolondolozo lwedijithali lwexesha elide kwimibutho ejongene nokukhula kwedatha okubonakalayo. Ukunikezelwa kuphela kugcino lwezinto ezingaphezulu kweminyaka engama-40, imveliso engagungqiyo yeSpectra Logic kunye nokugxilwa kwabathengi kungqinwa ngokwamkelwa kwezisombululo zayo ziinkokeli kumashishini amaninzi kwihlabathi liphela. I-Spectra yenza ukuba kufumaneke ukugcinwa kwedatha efikelelekayo, yeminyaka elishumi kunye nokufikelela ngokwenza iindlela ezintsha zokulawula ulwazi kuzo zonke iindlela zokugcina- kubandakanya ugcino, ugcino, ukugcinwa okubandayo, ilifu labucala kunye nelifu loluntu. Ukufunda ngakumbi, ndwendwela www.dzalicu.com/.
Previous: I-Art Loft ingena kwiXesha layo lesi-9 kwi-PBS yaseMzantsi Florida!
next: Iinkqubo zeVidiyo ze-TAG zifezekisa imeko yeQabane leTekhnoloji ye-AWS, inika abathengi ukufikelela ngakumbi kunye nokuguquguquka kokuhambisa usetyenziso losasazo